Shir looga hadlayo amaanka oo ka dhacay magaalada Gaalkacyo
Gaalkacyo:-Waxaa maanta ka dhacay magaalada Gaalkacyo ee xarunta Gobalka Mudug shir looga hadlayo amaanka magaalada Gaalakacyo iyadoo shirka ay ka soo qayb galeen xubno kale duwan oo ka tirsan bulshada ku dhaqan magaalada Gaalkacyo. Shirkaan ayaa waxaa looga hadlayey siddii loo adkeyn lahaa amaanka guud ee magaalada Gaalkacyo si looga foojignaado in mar kale qalalaase uu ka dhaca magaalada dhexmarana beelaha ku wada nool magaalada.
Afhayeenka Baarlamaanka Puntland Cabdirashiid Maxamed Xirsi oo maalmahaan ku sugnaa isaga iyo wafdi ka soo raacay magaalada Garoowe oo ka hadlay shirka ayaa sheegay in ay muhiim tahay in bulshada ku nool gaalkacyo ay ciidanka amaanka kala shaqeeyaan siddii loo sugi lahaa amaanka iyo nabadgelyada Gobolka Mudug arrinkaas oo muhiim u ah bulshada iyo maamulkaba.
Afhayeenka Baarlamaanka dowllada Puntland Cabdirashiid Maxamed Xirsi ayaa sheegay in dhinacooda ka maamul ahaan ay diyaar u yihiin in wax walba oo amaanka Gobolka Mudug lagu sugayo ay diyaar u yihiin kana saacidio doonaa maamulka Gobolka Mudug .
Dhinac kale waxaa goobta ka hadlay Guddoomiyaha gobolka Mudug , iyo Duqa magaalada Gaalkacayo waxaan ay ku booriyeen dhamaan dadkii ka soo qayb galay shirka in lagala shaqeeyo maamulka sidii amaanka iyo nabadgelyada loo adkeyn lahaa taas oo dan u ah bulshada ku nool Gobolka Mudug.